वैद्य र चन्दको पोखरामा जमघट
काठमाडौँ, काठमाडौं, २६ असोज । गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले ल्याएका उपलब्धिको समेत रक्षा गर्न त कताकता ध्वंस गर्ने योजना बनाउँदा असफल भएको नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठकमा तल्लिन छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई शुक्रबार सम्पर्कमा पुग्न सर्कुलर गरेको त्यो पार्टीले वामध्रुवीकरण, प्रदेश–संसद्को चुनाव ध्वंस गर्ने रणनीति तयार गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक पोखरामा आयोजना गरेको छ ।
प्रदेश तहमा स्थानीय चुनाव हुँदा चुनाव पक्षधरहरुलाई हावाकावा बनाउने हल्ला पिटाएको यो समूहले आगामी निर्वाचन ध्वंस गर्ने भनेको छ । मोहन वैद्य पक्षको पनि पोखरामा पार्टी अधिवेशन भइसकेको छ । मोहन वैद्य, मोहनविक्रमसँगै अक्टोबर क्रान्ति पक्षधर भनेर कार्यगत एकता गरेको नेकपालाई वैद्य र सिंहले स्थानीय चुनावमा छाडेका थिए ।
संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा र देशभक्त गणतानित्रक मोर्चाले भाग लिने घोषणा गरेका छन् । एमाले र माओवादीको एकतालाई चुनावी स्वार्थको एकता पनि भन्ने चुनावमा साथ उनीहरुकै लिनुपर्ने यी क्रान्तिकारीहरुप्रति नेकपाको विश्लेषणको ?
पार्टीको नाम जे राखे पनि नेत्रविक्रम चन्दको क्रान्तिकारी भाषणले फेरि देशमा युद्धको खाँचो देख्छ । तर, जनता तत्काल युद्धको पक्षमा छैनन् । १९ हजारको मृत्युले ल्याएको संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षाताको व्यवस्थापन गर्दै लगेको छ । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको छ ।
तर, १३ हजार वेपत्ता र घाइते अपाङ्गहरुले केही पाएका छैनन् । चन्दले उठाउने जनतामा आकर्षण दिलाउने मुद्दा यो थियो तर संसद चल्दै गर्दा संविधानसभाले संविधान जारी गर्दै गर्दा चन्दको गर्जन चर्केन ।
उनी त्यो बेला ध्वंस र युद्धकै प्रशिक्षणमा लागे । अब देश चुनावी माहोलमा गइसक्यो । मधेसमा राजपा र संघीय समाजवादीबीच चुनावी तालमेल हुँदैछ । एमाले, माओवादी, नयाँ शक्तिको देशभर चुनावको तालमेल हुँदै गर्दा नेकपा पश्चिमको एउटा कुनामा व्यवस्था नै ध्वंस गर्ने कस्तो रणनीति तयार गर्लान् ?
डाक्टर नै नभएकालाई तक्मा
सभापतिका लागि एक/एक जनाको मात्र उम्मेदवारी
पाँच वर्षमा उत्पादन वृद्धि दोब्बर बनाउन जोड : प्रधानमन्त्री
संघियता साधक कि बाधक ?
एघार हजार क्षमतामा २० हजार कैदीबन्दी
प्रतिनिधिसभा : पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग
भारतीय नम्बर प्लेट प्रयोग गरेकाले गोली हान्दा सुनसरीमा एकको मृत्यु, एक घाइते
माइतिघरमा फहरियो एक सय फिट लामो पोलमा आठ किलो वजन भएको नेपालको बिशाल झण्डा (भिडियो सहित)
संसदीय समितिका लागि आज मनोनयन, को-को प्रतिस्पर्धामा ?
ठेकेदारको चुनावमा गुण्डा नाइके घैंटेका पार्टनरदेखि कालो सूचीका व्यापारीसम्म
सरकारी अंगरक्षक सहित कालो दिन मनाउँदै प्रदेश मन्त्री,सरकारी कार्यालयमा समेत कालोझण्डा
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा कार्कीको उम्मेदवारी घोषणा, ५१ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक
सरकारमा जाने सम्भावना अन्त्य भयो : महतो
जोशीविरुद्ध नेकपाले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँदै
ठाडो आदेशमा कर्मचारी भर्ना
राष्ट्रपतिले लिएको सपथ असंवैधानीक भन्दै परेको रिट खारेज
वार्ताका लागि यस्ता छन् विप्लवका तीन सर्त
प्रहरी जवान शिवलाल पौडेललाई गोली हान्ने समूह यसरी भाग्यो भारततिर
जोशीलाई महाअभियोग लगाउने तयारी गर्दै, बसको ठक्करबाट २ जनाको मृत्यु, भिडियो खिचिरहेकै अवस्थामा गोली चल्यो
यस कारण दशैंको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ्ग नखुल्ने भयो
छलफल नै नगरी ल्याइएको कानूनले मुलुकमा समस्याः सयोजक ठाकुर
रहर : पेटको बोसो निकालेर नितम्बमा
सर्वोच्चको आदेश सरकारले टेरेन; प्रकाण्ड उदयपुर प्रहरीमा, आज म्याद थप
मन्त्रिहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीको 'थ्रेट' ! अमेरिका जानु अघिनै को को पर्दैछन् सकसमा ?